Halayaabin: Afartan Sababood Ayuu Lionel Messi Uga Wanaagsan Yahay Cristiano Ronaldo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Halayaabin: Afartan Sababood Ayuu Lionel Messi Uga Wanaagsan Yahay Cristiano Ronaldo
Published on December 13, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(14-12-2018) Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo muddo badan ayay dunida ciyaaraha u talinayeen, illaa haddana weli way taagan yihiin, mana dhamaanin dooddooda ah midka wanaagsan. Heerka naadiyada, wax walba oo suurtogal ah oo uu laacib kubadda cagta ah ciyaaro way ku guuleysteen, waxaanay wax wanaagsan ka sameeyeen heerka xulalka inkasta oo aanu midkoodna koob adduun ku guuleysanin.
Ronaldo iyo Messi waxa muddo sagaal sannadood ah xafiiltan gaar ah ayaa u dhexeeyey, sababtuna waa inay laba naadi oo colaad weyn ka dhaxayso u ciyaarayeen, kulan kastana waxa uu ahaa mid bandhigga uu midkood sameeyo lagu qiimeeyo midka kale.
Cristiano Ronaldo ayaa xafiiltankoodii hoos u dhigay markii uu ka tegay Real Madrid ee uu Juventus ku biiray xagaagii balse horraantii toddobaadka ayaa uu ka dalbaday Messi inuu kaga daba yimaaddo Talyaaniga, isaga oo ku dooday in xiddiga reer Argentine yahay mid aan weligii horyaal kale iyo koox kale oo aan ahayn Barcelona u ciyaaray.
Inkasta oo xog kasta oo ku saabsan midka wanaagsan labadan laacib oo lasoo bandhigaa ay dood keenayso, haddana waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa afar sababood oo Lionel Messi uu uga wanaagsan yahay Cristiano Ronaldo.
Messi waxa uu kaga wanaagsan yahay Ronaldo la ciyaarista Kooxdiisa
Ronaldo waxa uu magac weyn ku kasbaday bandhig ciyaareedkii uu kusoo bandhigay garoomada xilliyadiisii Manchester United iyo Real Madrid iyo hadda uu uu shaqo wanaagsan ka sameeyey Juventus oo uu muddo bilo ah joogo. Sannadaha badan ee uu guulaha shaqsiga ah iyo midka kooxoodba gaadhay, marna muu ahayn ciyaartoy ku wanaagsan la ciyaarista asxaabtiisa garoonka ay ku wada jiraan, waxaanu jecel yahay in isaga la siiyo kubbadda oo uu kaligii isku dayo wax kasta halkii uu kubadda u celin lahaa ciyaaryahannada kale ee laga yaabo inay taagan yihiin meel wanaagsan oo ay gool ku dhaliyaan.
Arrintan waxay keentay in xilligiisii Real Madrid uu cakirmo xidhiidhka uu la leeyahay Gareth Bale iyo Sergio Ramos, waxaana dhacday oo xattaa jamaahiirtu goob-joog u ahaayeen in aanu u damaashaadin goolal uu dhaliyey Bale oo uu u muuqday inuu ka xun yahay.
Lionel Messi wuu kaga duwan yahay arrintan, waxaanu sameeyaa gool caawin ka badan midda Ronaldo u sameeyo asxaabtiisa, waxaana u dheer inuu aad ula farxo, la damaashaado, lana qoslo laacibiint kooxdiisa marka ay goolal dhaliyaan.
Messi waa ciyaartoy kubbad samaynta kaga wanaagsan Ronaldo
Ronaldo waa halis marka uu kubadda ka helo agagaarka ama diilinta goolka kooxda kasoo horjeedda, waana ninka ay ugu cabsida badan yihiin kooxuhu, laakiin Messi wuxuu hayaa hal arrin oo uu kaga duwan yahay isaga.
Waxa uu Lionel Messi ka ciyaaraa booska loo yaqaano sagaalka beenta ah (false 9), garbaha bidixda iyo midigta iyo weliba khadka dhexe oo uu kubadda kasoo dhiso illaa khadka dambe ee difaaca. Waxa uu
leeyahay awood oo ku sameeyo isku-xig, kubbadda ugu habeeyo kooxdiisa marka culays ku yimaaddo, ugu dambayna si farshaxan leh u sameeya gool asxaabtiisu culayska kaga furfuraan.
Farsamadiisa cajiibka ah darteed, waxay si wanaagsan iskugu xidhmaan, isku fahmaan, una wada shaqeeyaan Busquets iyo Jordi Alba oo kubbad dhisidda kala qayb qaata, marka uu hore u dhaqaaqana waxay indhaha iska fahmaan Luis Suarez iyo Philippe Coutinho. Dhamaan farshaxankan uu ku fiican yahay Messi, waa kuwo uu ku fashilmo Cristiano Ronaldo.
Messi wuu ka xarfad iyo kubbad dhiibis badan yahay Cristiano Ronaldo
Messi iyo Ronaldo midba jidkiisa gaarka ah ayuu ku ciyaaraa, kuna maamushaa kubaddiisa marka ay hore u socdaan, laakiin Messi wuxuu si farsamaysan u dhaafi karaa ciyaartoyga hortaagan isaga oo aan is-dhibin. Xili ciyaareedkii 2017-18, Messi wuxuu ciyaar kasta sameeyey celcelis ahaan 5.1 xarfad ah oo hore u socod leh halka uu Ronaldo kulan kasta sameeyey 1.1.
Awoodda uu u leeyahay inuu xarfadayn karo ciyaarta, waxay Messi u sahashay inuu kala daadiyo difaacyahannada sida habaysan kooxuhu u diyaarsadaan ee ka hor yimaadda, waxaana u raacda in kulan kasta uu kubadda dhiibo 2.4 halka uu Ronaldo haysto 1.4.
Arrintan waxa caddayn u ah, xili ciyaareedkii tegay, Lionel Messi wuxuu caawiyey 12 gool oo asxaabtiisu dhaliyeen, laakiin Ronaldo ayaa danayste ahaa waxaanu caawiyey 5 gool oo kaliya.
Bandhigga Messi waa mid joogto ah
Ronaldo wuxuu ku guuleystay saddexdii Champions League ee ugu dambeeyey, shakina kuma jiro in isaga iyo Messi ay yihiin kuwa ugu horreeya ee bandhig ciyaareedkoodu joogtada yahay ee aanu hoos u dhicin. Laakiin haddii la eego dhamaan xili ciyaareedka, goolasha Cristiano Ronaldo hoos ayay u dhaceen halka Messi ay sare u kaceen xili ciyaareedkii tegay, kuna guuleystay kabta dahabka ah ee Yurub.
Meesha kale ee Messi uu joogteeyo waa in kulan kasta uu yahay laacib muuqda oo saamayn ku leh bandhigga kooxdiisa oo ugu yaraan uu caqabad ku noqdo difaaca kasoo horjeeda oo uu ka baabi’iyo, aakhirkana Suarez noqdo midka ka faa’iidaysta laakiin Cristiano Ronaldo wuxuu maqane jooga yahay kulamo badan amaba casaan iyo ganaax uu ku maqnaado sidii dhacday bilowga xili ciyaareedkii hore markii la ganaaxay kulankii Supercopa de Espana, taas oo keentay in Los Blancos ay kaalinta saddexaad ku dhamaysato horyaalka LaLiga.
Afartan arrimoodba waxay yihiin meelaha uu Lionel Messi kaga wanaagsan yahay ninka ay ficiltamaan ee Cristiano Ronaldo.